March 17, 2017 - Sawirrotv
Daily Archive for: 'March 17th, 2017'
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud oo Maanta ka Dhoofay Magaalada Muqdisho (VIDEO)
March 17, 2017 – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane, Xasan Shiikh Maxamuud iyo qoyskiisa ayaa saaka ka ambabaxay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya. Ex. madaxweyne Xasan Shiikh iyo qoyskiisa ayaa ku sii jeeday magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, iyagoo sii raacay dayuurada ay leedahay shirkadda Turkish Airlines. Madaxweynihii hore ayaa waxaa garoonka dayuuradaha ee …
Xasan Sheekh oo Muqdisho ka Dhoofay (VIDEO)
Ex. madaxweyne Xasan Shiikh iyo qoyskiisa ayaa ku sii jeeday magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, iyagoo sii raacay dayuurada ay leedahay shirkadda Turkish Airlines. Madaxweynihii hore ayaa waxaa garoonka dayuuradaha ee Aadan cadde ku sii sagootiyey masuuliyiin uu ka mid yahay guddoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya, Maxamed Cismaan Jawaari iyo xubno kale.
Afhayeenkii Ciidanka Booliska ee Dalka Ugandha oo Maalin Cad Lagu Toogtay Nawaaxiga Gurigiisa (VIDEO)
March 17, 2017 – Waxaa maanta magaalada Kampala ee caasimadda dalka Ugandha maalin cad lagu toogtay Afhayeenkii ciidanka booliska ee dalka Ugandha Mr. Andrew Felix Kaweesi, kaasi oo lagu dilay meel u dhow hoygii uu magaalada Kambaala ka deganaa. Andrew Felix Kaweesi ayaa waxaa dhabaha loogu galay meel ku dhow hoygiisa, ka dib markii gaari …
Dilkii Maanta ee Andrew Felix Kaweesi (VIDEO)
Andrew Felix Kaweesi ayaa waxaa dhabaha loogu galay meel ku dhow hoygiisa, ka dib markii gaari uu la socday lagu furay rasaas aan loo aabayeelin. Dilka kadib ayaa waxaa goobta isku gadaamay ciidamada amaanka ee wadankaasi, iyadoo dowlada wadanka Ugandha ay sheegtay in la baarayo weerarkani iyo cida ku lugta leh.
Markabkii Afduubnaa ee Lagu Haystay Xeebaha Puntland oo la sii Daayay (Dhagayso)
March 17, 2017 – Wararka ka soo baxaya mas’uuliyiinta deegaanada xeebaha Bari ee maamulka Puntland ayaa sheegaya in Xalay kooxihii afduubka ku haystay Markabka Aris 13, ay sii daayeen, kuwaasi oo labadii maalin ee la soo dhaafay ku haystay Degmada Caluula ee gobolka Bari. Wararka qaar ayaa sheegaya in wada hadal Siddex geesood ah uu …